6 Pashure pezvinhu izvi Jesu akaenda mhiri kwegungwa reGarireya, kana kuti Tibheriyasi.+ 2 Asi boka guru revanhu rakaramba richimutevera, nokuti vakanga vachiona zviratidzo zvaakanga achiita pane vaya vairwara.+ 3 Naizvozvo Jesu akakwira mugomo,+ uye imomo akanga akagara nevadzidzi vake. 4 Zvino paseka,+ iwo mutambo wevaJudha, yakanga yava pedyo. 5 Naizvozvo, Jesu paakasimudza maziso ake, akaona kuti boka guru revanhu rakanga richiuya kwaari, akati kuna Firipi: “Tichatenga kupi zvingwa zvokuti ava vadye?”+ 6 Zvisinei, akanga achitaura izvi kuti amuedze, nokuti iye aiziva zvaakanga ava kuda kuita. 7 Firipi akamupindura kuti: “Zvingwa zvemadhinari mazana maviri hazvikwani kuti mumwe nomumwe awane chiduku.”+ 8 Mumwe wevadzidzi vake, Andreya munun’una waSimoni Petro, akati kwaari: 9 “Heuno mukomana muduku ane zvingwa zvebhari+ zvishanu nehove duku mbiri. Asi izvi zvii pavanhu vazhinji kwazvo kudai?”+ 10 Jesu akati: “Itai kuti varume vatsenhame sezvinoitwa pakudya.”+ Zvino panzvimbo yacho pakanga paine uswa huzhinji. Nokudaro varume vacho vakatsenhama, vanenge zviuru zvishanu.+ 11 Naizvozvo Jesu akatora zvingwa uye, pashure pokunge aonga, akazvipa vaya vakanga vakatsenhama, uye ndizvo zvaakaitawo nehove duku sezvavaida.+ 12 Asi pavakanga vaguta,+ akati kuvadzidzi vake: “Unganidzai zvimedu zvasara, kuti parege kuva nezvinopambadzwa.” 13 Naizvozvo vakazviunganidza, uye vakazadza tswanda gumi nembiri nezvimedu zvakabva muzvingwa zvishanu zvebhari, zvakasiyiwa nevaya vakanga vadya.+ 14 Nokudaro vanhu pavakaona zviratidzo zvaakaita, vakatanga kuti: “Chokwadi uyu ndiye muprofita+ akanga achizouya munyika.” 15 Naizvozvo Jesu, achiziva kuti vakanga vava kuda kuuya kuzomubata kuti vamuite mambo, akabvazve,+ akaenda mugomo ari oga. 16 Ava manheru, vadzidzi vake vakaburukira kugungwa,+ 17 uye, pavakakwira chikepe, vakatanga kuyambuka gungwa vachienda kuKapenaume. Naizvozvo, panguva ino kwakanga kwava nerima uye Jesu akanga achigere kuuya kwavari. 18 Uyewo, gungwa rakatanga kunyanduka nokuti mhepo yakasimba yakanga ichivhuvhuta.+ 19 Zvisinei, pavakanga vakwasva kwemamaira anenge matatu kana kuti mana, vakaona Jesu achifamba pamusoro pegungwa achiswedera pedyo nechikepe; uye vakatya.+ 20 Asi iye akati kwavari: “Ndini; musatya!”+ 21 Naizvozvo ivo vakanga vachida kumugamuchira muchikepe, uye munguva pfupi chikepe chakanga chava panyika yakaoma kwavakanga vachiedza kuenda.+ 22 Zuva rakatevera boka revanhu rakanga rimire mhiri kwegungwa rakaona kuti pakanga pasina chikepe ipapo kunze kwechiduku chete, uye kuti Jesu akanga asina kupinda muchikepe nevadzidzi vake asi kuti vadzidzi vake chete ndivo vakanga vaenda; 23 asi zvikepe zvaibva kuTibheriyasi zvakasvika pedyo nenzvimbo yavakadyira chingwa pashure pokunge Ishe aonga. 24 Naizvozvo boka revanhu parakaona kuti Jesu uyewo vadzidzi vake vakanga vasipo, vakakwira zvikepe zvavo zviduku vakasvika kuKapenaume kuti vatsvake+ Jesu. 25 Naizvozvo pavakamuwana mhiri kwegungwa, vakati kwaari: “Rabhi,+ masvika kuno rini?” 26 Jesu akavapindura akati: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Hamusi kunditsvaka nokuti makaona zviratidzo, asi nokuti makadya zvingwa mukaguta.+ 27 Musashandira zvokudya zvinoparara,+ asi zvokudya zvinoramba zviripo nokuda kwoupenyu husingaperi,+ zvamuchapiwa noMwanakomana womunhu; nokuti Baba, iye Mwari, vakaisa paari chisimbiso chavo chokuti atenderwa.”+ 28 Naizvozvo vakati kwaari: “Tichaitei kuti tiite mabasa aMwari?” 29 Achipindura, Jesu akati kwavari: “Iri ndiro basa raMwari, kuti mutende+ muna Iye waakatuma.”+ 30 Naizvozvo vakati kwaari: “Saka, chiratidzo chauri kuita ndechipi,+ kuti tichione uye tikutende? Ibasa rei rauri kuita? 31 Madzitateguru edu akadya mana+ murenje, sokunyorwa kwazvakaitwa kuti, ‘Akavapa chingwa chakabva kudenga kuti vadye.’”+ 32 Nokudaro Jesu akati kwavari: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Mosesi haana kukupai chingwa chakabva kudenga, asi Baba vangu vanokupai chingwa chechokwadi chinobva kudenga.+ 33 Nokuti chingwa chaMwari ndiye uya anoburuka achibva kudenga opa upenyu kunyika.” 34 Naizvozvo vakati kwaari: “Ishe, garai muchitipa chingwa ichi.”+ 35 Jesu akati kwavari: “Ndini chingwa choupenyu. Anouya kwandiri haazombovi nenzara, uye anotenda mandiri haazombovi nenyota.+ 36 Asi ndakati kwamuri, Makatondiona asi hamutendi.+ 37 Zvinhu zvose zvandinopiwa naBaba zvichauya kwandiri, uye anouya kwandiri handizombomudzingi;+ 38 nokuti handina kuburuka ndichibva kudenga+ kuzoita zvandinoda, asi zvinodiwa naiye akandituma.+ 39 Izvi ndizvo zvinodiwa naiye akandituma, kuti ndirege kurasikirwa nechinhu pazvose zvaakandipa asi kuti ndinofanira kuchimutsa+ pazuva rokupedzisira. 40 Nokuti izvi ndizvo zvinodiwa naBaba vangu, kuti munhu wose anoona Mwanakomana otenda maari ave noupenyu husingaperi,+ uye ini ndichamumutsa pazuva rokupedzisira.”+ 41 Naizvozvo vaJudha vakatanga kumugunun’unira nokuti akati: “Ndini chingwa chakaburuka chichibva kudenga”;+ 42 uye vakatanga kuti:+ “Uyu haasi Jesu here mwanakomana waJosefa,+ anababa naamai vatinoziva? Zvino sei achiti, ‘Ndakaburuka kubva kudenga’?” 43 Achipindura, Jesu akati kwavari: “Regai kugunun’una pakati penyu. 44 Hapana munhu angauya kwandiri kana Baba, vakandituma, vakasaita kuti auye;+ uye ini ndichamumutsa pazuva rokupedzisira.+ 45 Mune Zvakanyorwa nevaprofita makanzi, ‘Vose vachadzidziswa naJehovha.’+ Munhu wose anenge anzwa kuna Baba akadzidza anouya kwandiri.+ 46 Hakusi kuti pane munhu akaona Baba,+ kunze kwouya anobva kuna Mwari; iyeyu ndiye akaona Baba.+ 47 Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Uyo anotenda ane upenyu husingaperi.+ 48 “Ndini chingwa+ choupenyu. 49 Madzitateguru enyu akadya mana+ murenje asi akafa. 50 Ichi ndicho chingwa chinoburuka chichibva kudenga, kuti munhu achidye arege kufa. 51 Ndini chingwa chipenyu chakaburuka chichibva kudenga; kana munhu akadya chingwa ichi achararama nokusingaperi; uye, chokwadi, chingwa chandichapa inyama+ yangu nokuda kwoupenyu hwenyika.”+ 52 Naizvozvo vaJudha vakatanga kuitirana nharo, vachiti: “Munhu uyu angatipa sei nyama yake kuti tidye?” 53 Naizvozvo Jesu akati kwavari: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Kana mukasadya nyama+ yoMwanakomana womunhu nokunwa ropa rake,+ hamuna upenyu+ mamuri. 54 Uya anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu ane upenyu husingaperi, uye ndichamumutsa+ pazuva rokupedzisira; 55 nokuti nyama yangu ndicho chokudya chechokwadi, uye ropa rangu ndicho chokunwa chechokwadi. 56 Uya anodya nyama yangu nokunwa ropa rangu anoramba ari pamwe neni, neni ndiri pamwe naye.+ 57 Baba vapenyu+ zvavakandituma, ini ndinoraramawo nokuda kwaBaba, anondidya, naiyewo achararama nokuda kwangu.+ 58 Ichi ndicho chingwa chakaburuka chichibva kudenga. Hazvina kuita sepaya madzitateguru enyu paakadya asi iwo akafa. Anodya chingwa ichi achararama nokusingaperi.”+ 59 Akataura zvinhu izvi paakanga achidzidzisa pakanga pakaungana vanhu muKapenaume. 60 Naizvozvo vazhinji vevadzidzi vake, pavakanzwa izvi, vakati: “Kutaura uku kunoshamisa kwazvo; ndiani angakuteerera?”+ 61 Asi Jesu, achiziva kuti vadzidzi vake vakanga vachigunun’una pamusoro peizvi, akati kwavari: “Izvi zvinokugumburai+ here? 62 Naizvozvo, zvakadini, kana mukaona Mwanakomana womunhu achikwira kwaaiva pakutanga?+ 63 Mudzimu ndiwo unopa upenyu;+ nyama haina kana zvainobatsira. Mashoko andataura kwamuri ndeomudzimu+ uye anopa upenyu.+ 64 Asi pane vamwe venyu vasingatendi.” Nokuti kubva pakutanga Jesu aiziva kuti ndivanaani vakanga vasingatendi uye kuti ndiani akanga achizomutengesa.+ 65 Naizvozvo akati: “Ndokusaka ndati kwamuri, Hapana angauya kwandiri kana akasabvumirwa naBaba.”+ 66 Nokuda kweizvi vazhinji vevadzidzi vake vakadzokera kuzvinhu zvavakasiya+ uye vakanga vasingachafambizve naye.+ 67 Naizvozvo Jesu akati kune vane gumi nevaviri: “Munoda kuendawo here?” 68 Simoni Petro+ akamupindura kuti: “Ishe, tichaenda kuna ani?+ Ndimi mune mashoko oupenyu husingaperi;+ 69 uye takatenda tikasvika pakuziva kuti ndimi Mutsvene waMwari.”+ 70 Jesu akavapindura kuti: “Handina kukusarudzai here imi vane gumi nevaviri?+ Asi mumwe wenyu mucheri.”+ 71 Chokwadi iye akanga achitaura nezvaJudhasi mwanakomana waSimoni Iskariyoti; nokuti iyeyu akanga achizomutengesa,+ kunyange zvazvo aiva mumwe wevane gumi nevaviri.